Yogacara kunye nohlobo lwamava
Unqulo & Umoya Mahayana Buddhism
I-Yogacara ("umendo we-yoga") yisebe lefilosofi likaMahayana Buddhism elivela eIndiya kwikhulu le-4 CE. Impembelelo yalo isabonakala namhlanje kwizikolo ezininzi zeBuddhism, kuquka i- Tibetan , iZen , neShingon .
I-Yogacara yaziwa nangokuthi yiVijanavada, okanye iSikolo saseVijnana, kuba i-Yogacara ibandakanyeke ngokukodwa kwimeko ye-Vijnana kunye nemeko yamava. I-Vijnana yenye yeentlobo zengqondo ezintathu ezichazwe kwiimibhalo zakuqala zeBuddha ezifana neSutta-pitak a.
I-Vijnana isoloko iguqulelwa kwisiNgesi ngokuthi "ukuqonda," "ukuqonda" okanye "ukwazi." Yesihlanu kweSikhamas ezintlanu .
Nangona ezinye iinkalo zemvelaphi yazo zi lahleka, umbhali-mlando waseBrithani uDamien Keown uthi ekuqaleni uYogacara yayixhunyaniswe negatsha laseGandhara lenkonzo yokuqala yamaBuddha ebizwa ngokuthi yiSarvastivada. Abasunguli babeziimonki ezibizwa ngokuthi nguAsanga, uVasubandhu, noMaitreyanatha, abo bonke bacinga ukuba banxulumene noSarvastivada ngaphambi kokuba baguqukele eMahayana.
Aba basunguli babona uYogacara njengesihlomelo kwifilosofi yaseMadhyamika eyenziwa ngu Nagarjuna , mhlawumbi ngekhulu lesi-2 CE. Baye bakholelwa ukuba uMadhyamika wayexhomekeke kakhulu kwi-nihilism ngokugxininisa ukungabikho kwamangqungquthela , nangona akungabazeki ukuba iNjjjjuna yayingavumelani.
Abaxhamli baseMadhyamika batyhola i-Yogacarins ye-substantialism okanye inkolelo yokuba uhlobo oluthile lwezinto eziyinyaniso liphantsi kweemeko, nangona oku kugxekwa kungabonakali ukuchaza ukufundiswa kwangempela kweYogacara.
Kwithuba elithile, izikolo zefilosofi zaseYogacara kunye neMadhyamika zazingqubana. Ngekhulu le-8, ifomu eliguquguqukileyo leYogacara lidibaniswe nefomu eguqulelwe iMadhyamika, kwaye le nfilosofi edibeneyo yenza inxalenye enkulu yeziseko zaseMahayana namhlanje.
I-Yogacara ayikho ifilosofi elula ukuyiqonda.
Abaphengululi bayo bavelise imodeli eyinkcazo echaza indlela ukuqonda kunye namava athambelana ngayo.Le mizekelo ichaza ngokucacileyo indlela abantu abahlangabezana ngayo nehlabathi.
Njengoko sele sele kuthethiwe, i-Yogacara ibandakanyeke ngokukodwa kwimeko ye vijnana kunye nemeko yamava. Kule ngongoma, sinokucinga nge-vijnana yindlela eyenziwa ngayo enye inqanaba lesithupha (iso, indlebe, impumlo, ulwimi, umzimba, ingqondo) njengesiseko sayo kunye nenye yezinto ezi-6 ezifanayo (into ebonakalayo, isandi, isandi , into ebonakalayo, icinga) njengento yayo. Umzekelo, ukuqonda okubonakalayo okanye i-vijnana-ukubona-ine-iso njengesiseko sayo kunye nesimo esibonakalayo njengento yaso. Ingqondo yengqondo inengqondo ( manas ) njengesiseko sayo kunye nembono okanye ingcamango njengento yayo. I-Vijnana yinto yokuqwashisa ekhutshisa ubuchule kunye neemeko.
Ezi ntlobo ezintandathu ze-vijnana, i-Yogacara zongeze ezimbini. I-vijnana yesixhenxe idinga ukuqonda, okanye i- klista-manas . Olu hlobo lolwazi lusekelwe kukucinga okuzimeleyo okuvelisa iingcamango zobugovu nokuzikhukhumeza. Inkolelo ekuzimeleyo, ngokuzimeleyo ivela kulesi sixhenxe i-vijnana.
Ngomdla wesibhozo, i- alaya-vijnana , ngamanye amaxesha kuthiwa "ukugcinwa kwengqondo." Le vijnana iqulethe konke okubonakalayo kumava adlulileyo, okuba yimbewu ye- karma .
Funda ngakumbi: Alaya-vijnana, i-Storehouse Consciousness
Kulula kakhulu, iYogacara ifundisa ukuba vijnana yinyani, kodwa izinto zokwazisa aziyiyo. Izinto esizicingayo njengezinto zangaphandle zidalwa ngokuqonda. Ngenxa yoko, iYogacara ngamanye amaxesha kuthiwa yi "ingqondo kuphela" yesikolo.
Isebenza kanjani lento? Wonke amava angakhange avulekwe adalwe iintlobo ezahlukeneyo ze vijnana, ezivelisa amava omntu, ukuzenzekela ngokusisigxina kunye neeprojekthi zezinto ezilahlekisayo. Ekukhanyeni, ezi modemon zokuqonda ziya guqulwa, kwaye iziphumo zokuqonda ziyakwazi ukuqonda ngokucacileyo ngokuchanekileyo nangokuthe ngqo.
Yogacara kwi Practice
"I-yoga" kulo mzekelo yi yoga yokucamngca (jonga " Ukugxininisa okufanelekileyo " kunye no " Samadhi ") eyona nto yayiyinxalenye yokuziqhelanisa. I-Yogacara nayo igxininise ukusetyenziswa kweMithandathu yokuPhelelwa.
Abafundi baseYogacara bahamba kwiinqanaba ezine zophuhliso. Eyokuqala, umfundi wafunda iimfundiso zeYogacara ukuze aziqonde kakuhle. Okwesibini, umfundi uhamba ngaphaya kweengcamango aze asebenze kwiinqanaba ezilishumi zokuphuhlisa i- bodhisattva , ebizwa ngokuthi i- bhumi . Kwesithathu, umfundi ugqiba ukudlula kwiinqanaba ezilishumi kwaye uqala ukuzikhulula kwiinqambi. Okwesine, ukungcola kupheliswe, kwaye umfundi uyakwazi ukukhanya
UbuBuddha kunye neNondualism eMahayana Buddhism
Ukuguqulwa kweThathu kweHolo likaDharma
Tiantai Buddhism e China
Imfazwe yaseBarbara yokuqala: iMfazwe yaseDerna
Funda iMbali yeDurga Idols e-Kumartuli, eCalcutta
Ukunyuka kweNtaba yaseBross eColorado
I-Diesel ne-Biodiesel Iimoto kwi-cold Weather: Izinto ezi-3 ezimele ziqaphele
Mirajo's Healing Miracle
Viking 1 kunye neViking 2 Missions kwi-Mars
Ukukhetha Izixhobo Ezifanelekileyo Ukufunda isiFrentshi
I-Orrication Funeral Pericle - iTycydides 'Version